Wednesday July 10, 2019 - 08:06:16 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Maxkamadda Ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saaka xukun dil ah ku fulisay saddexda Nin oo loo heystay weerarkii lagu qaaday Hotelka Naasahablood 2 ee Magaalada Muqdisho.
Saddexda Nin ee saaka Maxkamadda xukunta dilka ah ku fulisay ayaa kala ah; Farxaan Maxamed Samatar,C/naasir Dhaqane&Abshir Maxamed Xaaji.
Raggan ayaa lagu eedeeyay in ay fuliyeen weerarkii Hotel Naasahablood laba lagu qaaday 28kii October 2017kii, xilligaas oo ay ku dhinteen dad ka badan 20 qof.
Maxkamadda darajada 1aad ee Ciidamada iyo midda sare ee Ciidamada ayaa waxaa ay dil horay ugu xukumeen Ragga saaka la toogtay ee lagu helay in ay ka tirsanaayeen Al-shabaab.
Dowladda Soomaaliya ayaa xukukan fulisay muddo dheer kaddib iyada oo dhowr jeer dhaleeceyn kala kulantay Hay’adaha u dooda xuquuqda aadanaha ee diiddan fulinta xukunnada dilka ah.